२१ माघ २०७७, बुधबार ०५:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं
रामनारायण बिडारी सभापति, राष्ट्रिय सभा एवं नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
निर्वाचन आयोगले नेकपा विवादका सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णय अनिर्णयको बन्दी बन्यो, अन्योलपूर्ण भयो भन्ने छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग हो । ऊ सरकारमातहत हुँदैन । सरकारमातहत नहुने आयोगलाई सरकारको राग, सरकारको गन्ध वा सरकारको हरेक त्यहाँ नपुग्नुपर्ने हो । पुगेको छैन पनि होला । तर, आयोग आफैं अलिकति डराएको जस्तो देखिएको छ । तर, निर्वाचन आयोग डराउनु आवश्यक छैन ? संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ भएर नियुक्ति भएको हुनाले सरकारले कुनै कारबाही गर्न सक्दैन । हरेक नियुक्ति संवैधानिक परिषद्मा हाम्रो पार्टी , विपक्षी दल, सभामुखलगायत सबैको सहमतिमा भएको हो । तर स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले काम कारबाही गर्नमा भने उनीहरू अलिकति हिच्किचाएको जस्तो देखियो ।
आधिकारिकताको सवालमा निर्वाचन आयोगले दिएको निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ ?
अहिलेको निर्णयमा त निर्वाचन आयोगले धेरै गल्ती गरेको छैन । तर, केपी शर्मा ओलीलाई ‘तपाईंले पठाएको विवरणहरू उपयुक्त नै छ, जानकारी प्राप्त भयो, हामीले जानकारी पायौं’ भनेर लेख्यो भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भने ‘ राजनीतिक दलसम्बन्धी तपाईंहरूको के विवाद छ, दाबी गर्न आउनुहोला’ भनेर दाबी प्रस्तुत गर्न भन्यो । एउटै आयोगले दुईथरी पत्र दुई भाषामा दुईवटा पार्टीलाई किन दियो ? भन्ने सवाल मुख्य हो । समान ढंगले पत्राचार भनेको भए हुन्थ्यो । ओलीजीले ठीक त्यहीबेला हाम्रो त आफ्नै पार्टी हो, हामीले दाबी नै गर्नैपर्दैन भनिदिए । जो कमजोर छ, उसैले दाबी गर्छ नि भनिदिए । बाख्रा हराउनु र चितुुवा कराउनु एकैचोटि भएजस्तो भयो । त्यही तर्कका आधारमा हामीले दाबी गरेनौं । किनकि, हामीसँग केन्द्रीय सदस्यमा पनि बहुमत थियो । दलका नेताहरूमा पनि वरिष्ठ नेतासहितका कार्यकारिणी अध्यक्ष हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारणले प्रचण्डपट्टिबाट दाबी गरिरहने कुरा भएन भनेर दाबी गरिएन । निर्वाचन आयोगले तपाईंहरूको अभिलेखीकरण मात्र हेर्छाैं भनेर अभिलेखीकरण मात्र हे¥यो । केपी ओलीले १२ सयजतिलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनुभएकोलाई पनि मान्यता दिएन । ती सबै अब सडकमा पछारिए । यतापट्टि हामीले गरेको निर्णय पनि मान्यता दिएन । जसको कारणले गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण संरचना ४ सय ४१ जनाको पुरानै संरचनामा गएर बस्यो । सुरुमा पाटी एकता हुँदा जे थियो, त्यही भयो ।
त्यस्तो अवस्था भएपछि अब राजनीति कसरी अघि जान्छ त ?
त्यस्तो अवस्था भएपछि अहिले समस्या भयो । त्यो चिठीलाई आधार बनाएर पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले व्यापक छलफल पछि एउटा निचोड दिन्छ ।
के निचोड देला वा दिनुपर्छ ? तपाईंको यसमा सुझाव के हो ?
अब हामीले महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरिसकेका छौं, केपी शर्मा ओलीलाई पनि हटाउने निर्णय गरिसकेका छौं । हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार बहुमतले निर्णय गरेर केन्द्रीय समितिको १० प्रतिशत थप्न पाउने विधान छ । केही केन्द्रीय सदस्यको मृत्यु भएको छ र खाली ठाउँ छ भने कोही राज्यका विभिन्न पदमा जानुभएकाले खाली छ । ती सबै पदपूर्ति गर्दा हामी ३ सयभन्दा बढी सदस्य हामीसँग छन् । त्यसकारण, हाम्रो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को उपदफा ६ बमोजिम केन्द्रीय सदस्य जतापट्टि धेरै सुरुमा हुन्छ, त्यसलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ, अर्को पक्षलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न आऊ भनेर भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसअनुसार काम गर्न निर्वाचन आयोगले छिटो गर्नुपर्ने हो । यदि उसले छिटो गरेन भने निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार, अहिलेको प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन गर्ने पक्षमा रहेनछन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
त्यसकारण, यो निर्णय निर्वाचनको पक्षमा को रहेछ भनेर जाँच्ने कसी पनि हो । हामीले त चुनाव हुँदैन नै भनेका छौं । ओलीजीले चुनाव गर्ने नियतले यो काम गरेकै होइन भनेका छौं । उहाँहरूले चुनाव हुन्छ भन्नुभएको छ । चुनाव हुँदैन भन्ने कुराको प्रमाण यो निर्णय एक–दुई हप्ताका बीचमा गरिएन भने पक्कै चुनाव हुँदैन ।
निर्वाचन आयोगले सूर्य चिह्न र नेकपा पार्टी ओलीकै हो भनेर निर्णय गरिदियो भने…?
कुनै पनि हालतमा निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न र आधिकारिक नेकपा ओली पक्षलाई भन्न सक्दैन । यदि त्यसो भन्ने दुस्साहस ग¥यो भने निर्वाचन आयोगको मान्छे पृथ्वीमा हिँड्नै सक्दैन । २४सै घन्टा सेनाको घेरामा ससुराली जाँदा पनि जान सम्भव छ र ? नत्र, उनीहरू हिँड्नै सक्दैनन् ।
त्यसो भए के होला त ?
उनीहरूले गरिदिन सक्ने एउटा कुरा भने कुरा घुमाएर दुवै पक्षले पाउँदैनौं भनेर गोलमटोल षड्यन्त्र गर्छन् कि भन्ने मानिसहरूको आशंका छ । तर, हाम्रो पार्टी त्यो शंका गर्दैन । निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न र आधिकारिकता हामीलाई नै प्रदान गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
एकीकरणको अवस्थालाई नै आधिकारिक मान्दा दुइवटा भइसकेको पार्टी पुनः एक भएर जाने सम्भावना छ कि छैन ?
सय प्रतिशत नै अहिलेका लागि एक हुने सम्भावना छैन । तर यो पार्टी टुट र फुट त भइरहन्छ । एकदुई वर्षपछि फेरि पार्टी जुट्ने भन्ने कुरा नहुने कुरै भएन । अहिलेलाई ओलीजीसँग प्रचण्ड–माधव एउटै ठाउँमा बसेर काम गर्ने वातावरण छैन, हुँदैन ।
चुनाव साँँच्चै भन्ने मात्र हो कि सरकारले गर्नै चाहेको छ त ?
चुनावको मिति घोषणा गरिसकेपछि कुनै पनि दलको विवाद निरूपण गरिनेछैन भन्ने निर्वाचन आयोगको पुरानो नियमावली संशोधन गरेर आयोगले प्रक्रिया बढाएको रहेछ । चुनाव घोषणा भइसकेपछि दलमा विवाद आएकाले दलको विवाद निरूपण पहिले गर्नुपर्ने कारणले आयोगले उक्त नियमावली संशोधन गरेको रहेछ । यो विवाद अन्य पार्टीमा पनि छन्् । तसर्थ उसले यस्तो बेलामा पनि विवाद निरूपण गर्न मिल्छ भन्ने बुँदा संशोधन गरेको छ । तर त्यो विषयलाई ओली पक्षले पहिलेदेखि नै घोर विरोध गरिरहेको थियो । त्यस नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो नेपाल सरकारको मुद्रण विभागमा छापिन्छ । आयोगले पठाएको त्यो राजपत्र अहिले पनि सरकारले छपाइ नगरेपछि लागु हुन सकेको छैन । अब आयोगले कि आफ्नै प्रेसबाट त्यो छाप्नुप¥यो, कि नेपाल सरकारलाई ताकेता गरेर किन छापेन भनेर चेतावनी दिनुप¥यो । यदि त्यसो गर्दा पनि गरेन भने ओलीजीले चुनाव गर्न खोजेकै होइन भन्ने आशंकालाई सत्य साबित गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।
तपाईंले सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी बहस गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई हुतीहारा भनेर प्रयोग गरिएको भाषाबारे इजलासले आपत्ति प्रकट गरेको भन्ने कुरा के हो ?
त्यस्तो आपत्ति केही होइन । अदालतका न्यायाधीशहरूको बोलीचालीको भाषा र जनताको बोलीचालीको भाषा अलि फरक हुन्छ । जनताले भन्छन्– भात खानुभयो ? सम्भ्रान्त परिवारले ‘भुजा ज्युनार गरिवक्स्यो ?’ भन्छ । कुरा त दुइवटै एकै हो । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले मलाई ‘अपशब्दहरू पर्न गयो कि ?’ भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो । मैले त्यस्तो पर्न गएको छैन श्रीमान्, असक्षम हो, महाराजधिराजले पनि केही प्रधानमन्त्रीलाई असक्षम भनेर हटाएकै हुन्, त्यसकारण असक्षम भएकालाई वैकल्पिक भाषामा ‘हुतिहारा’ भनिएको हो । तसर्थ यो अश्लील होइन, अपशब्द पनि होइन भनें । उहाँले ‘गो अहेड, केही छैन, कुरा राख्नुस्’ भन्नुभयो ।
पछिल्लो समय दुई पक्षको दोहोरी परिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल र प्रचण्डलाई खिया लागेका नट बोल्टु फुस्किएको, भेट्नु कुहिएर रूखबाट झरेको फलजस्ता विम्ब प्रयोग गरे, यी पनि अपशब्द होइनन् त ?
हो, अपशव्द भनेका यिनै हुन् । होच्याउने यसरी नै हो । अदालतले पनि संविधानमा टेकेर न व्याख्या गर्ने हो । मैले के प्रसंगमा भनेको हो भने ओलीजीले पार्टी पनि चलाउन सक्नुभएन, संसद्को विश्वास लिएर सरकार पनि हाँक्न सक्नुभएन । संसद् पनि नहाँक्ने र पार्टी पनि नहाँक्ने अनि मनलागी बोल्दै हिँड्ने ? प्रधानमन्त्री हुन पार्टी चाहिने ? प्रधानमन्त्री हुन संविधान चाहिने ? अनि संसद् विघटन गर्नलाई संविधान नचाहिने ? संविधानमा लेख्दै नलेखेको कुरा गरिदिने ? अहिले जेजे बिम्ब उहाँले प्रयोग गर्नुुभएको छ, ती सबै कुरा उहाँका दम्भ हुन् ।
तर हुतिहारा नै किन भन्नुपरेको त ?
आफ्नो पार्टीभित्र फेस गर्न हिम्मत नगर्ने । उहाँले ६४ प्रतिशत बहुमत छ भनेको होइन ? ६४ प्रतिशत भएको मान्छे संसद्मा गएर विश्वासको मत लिए भयो नि । अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरे भयो नि त । तसर्थ, पछिल्लोपटक उहाँ आतंकित हुनुभएको छ । निभ्ने बेलाको बत्तीजस्तो हुनुभएको छ । विनाशकाले विपरीत बुद्धि जस्तै हो । त्यति मात्र नभएर उहाँको यो अन्तिम बेलामा मान्छेको बर्रवराहट हो ।
तर उहाँले चुनाव भनेपछि हार्ने डरले भाग्न लागेका हुन् भन्नुभयो नि ?
हरेक संसारका तानशाहहरू, निरंकुशहरू, राजाहरू यसै भन्थे । चाहे हिटलरको होस् वा चाहे महेन्द्र राजाको होस्, चाहे ज्ञानेन्द्रको होस्, चाहे ओलीको होस्, यी सबैको दम्भ एकै हो । चुनाव जान हामी किन डराउने ? तर, उनले मन लागेको बेला चुनाव गराउने हो र ? संविधानले चुनाव तोकेको छ नि पाँच–पाँच वर्षमा ? संविधानले तोकेको चुनावमा जाऔं न, ओलीको पत्तासाफ हुन्छ । त्यसकारण, उहाँले यस्ता कुरा गर्नु वाहियात हो ।
पछिल्लो समय सुशासन देखिएन, भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन र सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरेको भन्ने कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो सत्य हो । भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने पार्टी तर भ्रष्टाचार बढेको छैन भन्ने प्रधानमन्त्री । सुशासन भएको जिकिर गर्ने प्रधानमन्त्री तर सुशासन होइन, कुशासन भइरहेको छ भन्ने पार्टी व्यापक छ । कुन अड्डामा गएपछि घुस छल्दैन ? उहाँ आफैंले घुस खाएको कुरा त हामी जान्दैनांै तर उहाँ वरिपरि बसेका मान्छेलाई जे आरोप लागेको छ, ती आरोपमा उहाँले डिफेन्स किन गर्नुप¥यो ? त्यसबाट पनि बुझिन्छ ।
तर पाँच महिनाअघि तपाईंकै भाषण सत्ताको पक्षमा हुन्थ्यो, अहिले कुरा बाझियो नि ?
त्यो बेलामा पनि यो सरकारले उल्का राम्रो गरेको छ भन्ने मान्छे परिनँ म । मैले यो सरकारले पनि राम्रो गर्न सकेन तर विगतको सरकारले जसरी काम बिगारेको छैन, सुधारको प्रयास गरिरहेको छ भन्थें । जग हाल्ने काम ग¥यो, घर पूरा तयार भएपछि केही देखिन्छ भनेको, घर बन्नै नदिई भत्काइदिएपछि के देखिनु ? भ्रष्टाचार ठ्याक्र्याक्कै घट्यो भनेको होइन, सबैतिर भ्रष्टाचार छ, बरु कहाँ छैन भनेको छु ।
तपाईं राष्ट्रपतिबाट विज्ञका रूपमा मनोनीत भएर पनि एक पक्षमा बोल्न थाल्नुभयो भन्ने आरोप छ नि, साझा व्यक्तिका रूपमा राष्ट्रका लागि अपनत्व राखेर बोल्न मिल्दैन ?
म गुटमा लागेको होइन । म संविधानको रक्षा गर्न बोलेको हुँ । सर्वोच्चमा वहस गर्दा पनि सुरुमै सात–आठ वर्षदेखि अदालत बहस गर्न नआएको मान्छे योपटक यो मुद्दामा बहस गर्न आवश्यक ठान्छु भनें । मैले त्यहाँ भने– श्रीमान् ! मेरो आत्माले मानेन । यहाँ ठूलो अपराध भयो । संविधानमाथि बलात् हस्तक्षेप गरियो, दुरुपयोग गरियो । व्यवस्था खतम हुन लाग्यो । म केपी शर्मा ओलीको निजी रूपमा विरोधी होइन । तर, उहाँले अहिले गर्नुभएका कामको म घोर विरोधी हुँ । अहिले उहाँले संविधानले दिँदै नदिएको काम गर्नुभयो । महामहिम राष्ट्रपतिविरुद्ध मैले कहिल्यै एक शब्द बोलेको छैन । तर उहाँले पनि संविधानको संरक्षक भइदिनुप¥यो । पालक भइदिनुप¥यो । संविधानमा नलेखेको कुरा प्रधानमन्त्रीले लेखेर लगेपछि उहाँले फेरि धाराहरू थपेर, सच्याएर गर्न नहुने कुरालाई प्रोत्साहन दिनुभयो । उहाँकै प्रतिनिधि भएकै कारणले मैले यति भनेको । हुन त राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई आलटाल गर्नुहुँदैन । तर, मजस्ता उहाँबाट मनोनीतलाई बोलाएर सोध्न सक्नुहुन्थ्यो । विभिन्न कानुन विज्ञसँग परामर्श गर्न सक्नुहुन्थ्यो । राजनीतिक नेताहरूसँग सल्लाह गर्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यो गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यसो गरिदिएको भए उहाँको तटस्थता देखिन्थ्यो । साझा देखिन्थ्यो । त्यही कुरा भनेको हो । त्यो कुरा गर्दा राष्ट्रपतिको विरोध गरेको ठान्नुभएन ।
संवैधानिक परिषद्मा भएका नियुक्तिबारे विवाद छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
जे कुरा पनि हठात् र बलात् गरेर हुँदैन । अहिले हाम्रो संविधानले संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरेको छ । संसदीय सुनुवाई नभई नियुक्ति हुन्न भनेको छ । तसर्थ ंविधानले भनेका भन्दा बेगर नियुक्ति दिन पाइन्छ ? अहिले सिफारिस भएका पात्रबारे मेरो केही टिप्पणी छैन तर मैले प्रक्रिया र संविधानको कुरा गर्नैपर्छ । आफैंले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंगको सिफारिस पनि गर्ने अर्कोतिर नियुक्तिका लागि सिफारिस पनि गर्ने, यस्तो काम गर्न मिल्दैन । जब संसदीय समिति छैन भने ४५ दिन सुरु नै भएन । नियमावलीमा ४५ दिन भनेको अर्थ विषयहरू समितिमा प्रवेश गरेको दिनबाट गन्ने हो । प्रतिनिधीसभा पुनःस्थापन भयो र समितिहरू गठन भएर त्यसमा विषय प्रवेश ग¥यो भने मात्र उहाँहरूले नियुक्ति पाउनुहुन्छ ।